Sida Looga Adkaan Karo Naagta - Talooyin Ku Saabsan Ragga Qaaliga Ah | Ragga Stylish
Alicia tomero | 22/07/2021 10:38 | Lamaanaha iyo Galmada
Waligeedba waxaa jirtay farshaxanka sasabashada ninkuna had iyo jeer wuu jecel yahay tab iyo xeelad kasta oo uu ku ogaan karo sida loogu guuleysto haweeneyda. Si kastaba ha noqotee, ma jiro nooc dhaqan ama qaab sixir ah oo gacanta lagu hayaa oo la awoodo, laakiin waa wax fudud sida loo isku dayo helitaanka kiimikada iyo shakhsiyaddaadu ha qulqusho.
Waxaa jira dhinacyo badan oo dabooli kara dariiqa lagu gaaro guulaysiga. Erayada guud ahaan waxaan tilmaami karnaa in isku dayga ah in qof lagu jeclaado uusan si fiican u shaqeynaynin, waxaa fiican in loo baahdo daqiiqad, daqiiqad gariir badan. Laakiin waxaan adeegsan karnaa faahfaahin taxane ah iyo fureyaal shaqeyn kara oo suurtagal ka dhigaya qabsashadu. ku soo afjar dhamaadka wanaagsan.
1 Maxay yihiin furayaasha lagu guuleysto haweeney?
1.1 Furaha ugu weyn ee ugu weyn waa inaad naftaada jeceshahay
2 Iska ilaali muuqaalkaaga
2.1 Muuji shakhsiyad dhexdhexaad ah
2.2 U muuji xiise iyo daryeel wax kasta oo aad jeceshahay
2.3 Ma seegi kartid dareen kaftan ah
2.4 Taariikh ka dhig mid xiiso leh oo ka duwan
Maxay yihiin furayaasha lagu guuleysto haweeney?
Inta lagu jiro isku dayga lagu guuleysto haweeneyda ayaa ah sii muuqaalkaas nin xiise leh, Shaki la'aanna su'aal maahan inaad iska dhigto wax aadan ahayn, laakiin inaad tahay.
Furaha ugu weyn ee ugu weyn waa inaad naftaada jeceshahay
In kasta oo ay doqonnimo u muuqato, haddana waa wax ay dumarku aad u jecel yihiin oo aad u qiimeeyaan. Nin iskama dhigi karo mid xiise leh ka dibna noloshiisa ma haysto. Uma baahnid inaad muujisid jir wanaagsan, inaad caqli badan tahay, ama aad shaqo fiican haysato. Waan ognahay inay kuwani yihiin dhinacyo soo jiita waxyaabo badan, maaddaama inteena badani ay eegto faahfaahintaas.
Laakiin naag dhamaadka qiimeyn doonaa qaybta miyir-qabka inbadan iyo dadka leh himilooyin waaweyn oo nolosha ah. Haddii aadan aqoon meesha aad ka bilaabeysid, waxaad ku bilaabi kartaa inaad kobciso faahfaahin qaar sida: naftaada ujeedo yoolal waaweyn (daraasado, tartamo ama shaqooyin), leylis isboorti, aqri, baro xirfado cusub ama soo jeedin in la sameeyo waxyaabo kaa dhigaya kuwo aad u faraxsan.
Iska ilaali muuqaalkaaga
Shaki la’aan wajigan waa aasaas. Qofka jecel inuu naftiisa daryeelo gudaha iyo dibaddaba wuxuu had iyo jeer siin doonaa dareenka ugu fiican. Waa in leeyihiin a muuqaal nadiif ah, nidaamsan oo xiro cadar wanaagsan oo shaqsi ahaaneed. Haddii aad sidoo kale ku dhiirratid inaad jimicsiga isboortiga gasho, arrin aad muhiim u ah ayaa lagu dari doonaa mustaqbalka fog si loo daryeelo caafimaadkaaga. Dhiirigelin kale oo aad ku dari karto ayaa ah inaad isku daydo inaad beddesho muuqaalkaaga, waad ka bixi kartaa aaggaaga raaxada oo waxaad isku dayi kartaa waxyaabo cusub. Dhar cusub ku dar dharkaaga dharkaaga ama beddel timahaaga.
Muuji shakhsiyad dhexdhexaad ah
Tani waa soo gal muhiim ah waana mid dumar badani ay fiiro gaar ah u leeyihiin. Mid waa inuu noqo qof isku kalsoon, oo leh shaqsiyad baxaysa, inkasta oo ayna ahayn qaab buunbuunin ah. Ha ku kalsoonaan haween badan, maxaa yeelay waxay umuuqataa mid edeb daran.
Sidoo kale ha u feejignayn sida aad wax u samaynayso ama waxa ay dadka kale u maleynayaan inay u dhaqmayaan si cayiman. Haddii ay ka mid tahay shakhsiyaddaada waa inaad iyaga sameysaa oo aad kalsooni ku qabtaa naftaada. Qofka dabeecaddan leh oo aan had iyo jeer ka cabanin waxa dhacaya, wuxuu soo jiitaa xaaladaha wanaagsan si aad u wanaagsan.
U muuji xiise iyo daryeel wax kasta oo aad jeceshahay
Wadahadalku waa furaha haweeneyduna waxay jeceshahay inay ogaato maxaa ka dambeeya miyirka qofka. Ninka foojignaanta leh ee haweeneydu ay jajabisay wuxuu lahaan doonaa fursado badan oo badan si uu u helo guul weyn.
Haddii haweeneydaasi ay leedahay shaqsiyad gaar ah iyo dano shaqsiyadeed, waad awoodi kartaa markasta isku qor wixii uu jecel yahay inaad awood u yeelatid inaad yeelato mowduuc wadahadal ah oo labadiinuba xiisaynaya. Faahfaahin kale oo iyaga ka yaabisa ayaa ah sidoo kale barashada waxyaalo cusub oo ku saabsan ninka iyo ogaanshaha in aanay waqti iskaga lumin markay taariikh yeeshaan. Ma waayi kartid faahfaahin ku saabsan sida ay u labisan tahay, timaheeda ama sida loo qaabeeyey. Haweenka sida in raggu u fiirsadaan iyo in loo sheego inay aad u qurux badan yihiin, ereyo jacayl leh.
Ma seegi kartid dareen kaftan ah
Dareenka kaftanku waa qayb ka mid ah shakhsiyadda taasina waa xoog weyn. Dareenkaani wuxuu doorbidaa dhamaan duruufaha wanaagsan ee nolosha, wuxuu caawiyaa sameynta saaxiibtinimo bulsho ahaan, waxay yareysaa buuqa iyo diiqadda.
Haweeneydu waxay jeclaan doontaa inay faraxsanaato oo ay taariikh la yeelato wanaag dareen wanaagsan oo qosol ka buuxo. Waa sheeko aasaasi ah in gabadhaas maskax ahaan loo soo jiito. Haa runtii, waa inay noqotaa wax iska yimid oo aan lagu qasbin, maadaama ay tilmaami karto wax been abuur ah oo u eg "qosol."
Taariikh ka dhig mid xiiso leh oo ka duwan
Waad hagaajin kartaa oo aad sameyn kartaa taas markan noqo taariikh ka duwan oo xiiso leh. Waxaad isku dayi kartaa waxyaabo kala duwan, sida inaad aadeyso meelo cusub, iskuday inaad aadeyso jardiinada madadaalada, dalxiisyo kala duwan, isboorti xad dhaaf ah ... ama barashada sida loo karsado saxan cusub.
Muhiimadu waa in la sameeyo wax ka duwan kulankaas oo markasta oo ay qaab u hesho wax la mid ah way ku xusuusan doontaa. Ha iloobin in waxa muhiimka ah ee tilmaamahani yihiin leedahay shakhsiyad kuu gaar ah taasina waxay tusinaysaa inaad naftaada jeceshahay. Waa inaad u oggolaataa dulqaadku inuu xukumo oo aad ku raaxaysato dhammaan daqiiqadaha ay noloshu ku siiso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Sidee naag loo sasabaa